Amandla avela kumanzi amdaka | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Amandla avela kumanzi amdaka
Adriana | | Amandla obushushu, Umoya ovuselelekayo, IHydrogen
Kuzo zonke izixeko zehlabathi amanzi amdaka Bayingxaki enkulu ekufuneka bejongane nayo ngokufaka izityalo zonyango ukulungisa ingxaki. Kodwa sekuyiminyaka ngoku, itekhnoloji, iindlela kunye neenkqubo ziphandiwe kwaye zenziwa zisebenzisa le nkunkuma ukuba zisebenze njengesiseko sokuvelisa amandla.
Amathuba okusetyenziswa kwakhona kwamanzi amdaka ahlukeneyo njengokufumana i-biogas, umbane, umoya opholileyo ngobushushu obuhlala buphuma emanzini, umbane oveliswe ziintsholongwane. inkunkuma nabanye
Eminye imizekelo esebenzayo ngoku yile:
Kwisixeko saseWolfsburg eJamani sinenkqubo efumana amandla kumanzi amdaka afunyanwa yi-biogas asetyenziswa kwisityalo ngokwawo, kwaye umgquba ungasetyenziselwa ukusetyenziswa kwezolimo.
Kwisixeko saseBasel, eSwitzerland, kuphuhliswa itekhnoloji ebuyisa ubushushu emanzini amdaka ahamba ngonyango lokucoca. Olu bushushu lusetyenziselwa ukufudumeza kwakhona. Amava afanayo ayenzeka eJamani.
E-United States, iiprojekthi ezinobuchwephesha obahlukeneyo ziyamiliselwa ukusebenzisa i methane eveliswa ngokuxuba amanzi amdaka kunye nenkunkuma yendalo. IMethane ifezekiswa ngeendlela ezincinci ezihlisa inkunkuma kwaye igesi iveliswe.
Ezinye iindlela zokufumana amandla kukwenziwa kweeseli zepetroli. Inkqubo inezinto ezincinane zokucola iintsalela zamanzi amdaka, ukukhulula ii-elektroni ezivelisayo amandla kagesi.
La ngamava nje athile ayavavanywa emhlabeni, ukwenzela ukunciphisa inkunkuma evela kumanzi angcolileyo kwaye kwangaxeshanye kuyile imithombo emitsha yamandla kwanokusetyenziselwa okuthile okanye okuthintelweyo.
Kubalulekile ukuqhubeka nokuphanda, ukuphuhlisa kunye nokwenza iindlela zokwenza igesi, umbane, umgquba ngendleko efikelelekayo, usebenzisa ezinye iindlela ezinje ngamanzi angcolileyo.
Ukuba kunokwenzeka ukuphucula nokwenza imithombo emitsha yemveliso yamandla ngendlela yendalo, iingxaki ezininzi zokusingqongileyo ziya kusonjululwa kwaye namandla ehlabathi aya kwandiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Amandla aqhelekileyo » Amandla obushushu » Amandla avela kumanzi amdaka
Ndimi kakuhle k kukho abaphandi abaninzi ukuba bakwazi ukusebenzisa onke amanzi kuba ayadingeka kakhulu kwaye akufuneki ukuba simoshe kwaye abo babeka ezi ndaba bame kakuhle kakhulu, enkosi kakhulu ukuba ndivule kakhulu oku, amanzi abaluleke kakhulu kubo bonke abantu.
Kuya kuba njani ukwenza amandla avela emanzini ngokusebenzisa i-electrolysis kunye nekhonkco kunye neebhetri zeHydrogen?
Izakhiwo ze-Eco kunye namandla ahlaziyekayo
Iingcebiso ezi-7 zokonga umbane